» बहुचर्चित गीत ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’ युट्युबबाट हट्यो
१८ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०७:४९
चन्द्र घलान/मकवानपुर, १८ जेठ । ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’ यो चर्चित गीतलाई नसुन्ने नेपाली श्रोताहरु सायद कोही छैनन् होला । हुन त यो गीतको ओरिजिनल भर्सन सन् २०१६ को मे महिनामा गायक श्याम कार्कीले आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । ‘२०१६’ एल्बममा समावेश यस गीतको शब्द, सँगीत र गायकको आवाज निकै नै कर्णप्रिय छ । विगतमा यो गीतको फ्यान धेरै भएता पनि यस गीतलाई भर्खरैका युवाहरुले सुन्ने मौका पाएका थिएनन् । तर ईन्ष्टाको फोटो गीतको जवाफी कभर गीत गाएसँगै एकाएक चर्चामा आएकी गायिका एलिना चौहानले यो गीतको कभर करिब ३ वर्षपछि गाएपछि भने यो गीत भाईरल भयो । युट्युबमा समेत यस गीतले निकै समय युट्युब ट्रेण्डिङको पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भयो । कभर गीत सुनेकै कारण यसको ओरिजिनल गीत खोज्नेहरु समेत बढे र अन्तत ओरिजिनल गीतको समेत निकै नै चर्चा भयो । टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा एलिनाको कभर भर्सन र ओरिजिनल भर्सनको उत्तिकै चर्चा भयो । तर यस गीतलाई थप उचाई प्रदान गर्न सफल गायिका एलिना चौहानलाई भने ठूलो बज्रपात भएको छ । मे ३ तारिखमा मात्र युट्युबमा अपलोड गरिएको ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’ बोलको कभर गीत युट्युबबाट हट्ने उनले संकेत गरेको एकदिन पछि शुक्रबार उक्त गीत युट्युबबाट हटाइएको छ । वास्तवमा के हो लफडा ? किन हटाईँदैछ उनको कभर गीत ? यो प्रश्न आम श्रोताहरुले गरेका छन् । उनले बिहीबार उक्त गीत हट्नसक्ने भन्दै आफ्नो फेसबुक मार्फत स्टाटस लेखेकी छिन् । के लेखेकी छिन् त उनले फेसबुकमा ? आउनुस् यस बारे चर्चा गरौँ । हेरौँ यो भिडियो सामाग्री-
एलिनाले फेसबुक स्टाटसमा यस्तो लेखेकी छिन्–‘मेरा सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई धन्यवाद । जे छु हजुरहरुले गर्दा छु । एउटा गीतको रेस्पेक्ट गरेर मन पराएर नै मैले कभर गरेको थिएँ । तर मैले कभर गाउँदा ओरिजिनल टिमलाई असर पर्यो जस्तो लाग्यो । यो गीत सृजन ागर्ने सम्पूर्णमा मेरो सम्मान छ, मैले कसैलाई असर पार्न, तल देखाउन यो गीत गाको थिईनँ । सोधेर पर्मिसन लिएर गरेको थिएँ । र यो गीत मैले हिट बनाएको सोच पनि मेरो होईन । गीत एकदमै मिठो थियो, त्यसैले हिट भयो । सायद यो गीत हट्छ होला युट्युबबाट । तर हजुरहरुको माया, साथ नहटोस् । हजुरहरु सामु अब आफ्नो गीत लिएर आउने वाचा गर्दछु । मैले ओरिजिनलको अपमान गरेँ भन्नुहुन्छ भने, ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’ टिमलाई माफी माग्न चाहान्छु । धन्यवाद ।’
एलिनाको स्टाटस हेर्दा उनी पनि कपिराईटकै सिकार भएको अन्दाज लाउन सकिन्छ । हुन त उनले सोधेरै उक्त गीतको कभर गरेको बताएकी छिन् । साथै गीत डिलिट भएपछि आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले गायक श्याम कार्कीसँगको च्याट म्यासेज समेत सार्वजनिक गरेकी छिन् । तर वास्तविकता के हो त्यो भने उनी स्वयमलाई मात्र थाहा छ । कभर गीत गाउँदा समेत अनुमति नलिएको भएमा चाहिँ एलिनालाई साँच्चिकै तनाव हुनसक्छ । तर यदि ओरिजिनल गीतको टिमसँग सहमतिमै कभर गीत गाइएको हो भने चाहिँ उनी सुरक्षित छिन् । एलिनाको पीडादायी स्टाटस आएपछि त्यसमा उनका श्रोताहरुले उनको नयाँ प्रोजेक्टका लागि बधाई दिएका छन् । साथै उनलाई चिन्ता नलिन समेत आग्रह गरिएको छ । उनको आवाज मिठो भएको भन्दै श्रोताहरुले उनलाई अब आफ्नै गीत ल्याउन समेत सुझाएका छन् । अब एलिनाले के गर्लिन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यस गीतको ओरिजिनल भर्सनमा रवि मल्लको शब्द र विराट कदरियाको संगीत रहेको छ । अलमोडा राना उप्रेतीको संगीत संयोजन रहेको गीतलाई बिजु कर्मचार्यले मिक्सिङ गरेका छन् । एलिनाको कभरलाई भने क्रोमाटिक एभी स्टुडियोले युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । कभर भर्सनमा देव लवारले संगीत संयोजन गरेका छन् । यस अघि कालिप्रसाद बास्कोटाको चर्चित गीत ‘ईन्ष्टाको फोटो’ को जवाफी कभर भर्सन गाएर चर्चामा आएकी एलिना झापाकी हुन् । २३ वर्षीय एलिना आर्टसमा ब्याचलर गर्दैछन् । शिक्षण पेशामा समेत आवद्ध एलिना आफुलाई नेहा कक्कर र मेलिना राईको फ्यान बताउँछिन् । कन्काई बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत उनी चर्चित गायिका बन्ने लक्ष्य राख्छिन् ।
गीतको ओरिजिनल भर्सनको भिडियोमा आश्मान गिरीको फिचरिङ गरिएको गीतको म्युजिक भिडियोमा दिया तामाङ र रोशन लामाको संवाद समावेश छ । सतिज श्रेष्ठ, अनिल के मानन्धर र उमंग शाहीको छायाँकन रहेको गीतको म्यूजिक भिडियोलाई सतिज श्रेष्ठले भिएफएक्स, सम्पादन तथा निर्देशन गरेका हुन् । म्युजिक भिडियोलाई जिवन चौँलागाईले सहनिर्देशन गरेका हुन् । बलराम बुढाथोकीले भिडियो निर्माण गरेका हुन् ।
गीतलाई केही समय अघि मात्र चर्चित डान्सर तेरिया मगरले समेत कभर गरेकी थिईन् । उनको कभरलाई समेत निकै मनपराइएको थियो । उनको कभर गीतलाई यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा १८ लाख १० हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । गीतमा ८१ हजार लाईक तथा ३ हजारभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् । डान्सरका रुपमा चिनिएका तेरियालाई यो गीतले संगीत क्षेत्रमा समेत परिचित गराएको छ । गीतको भिडियोलाई चर्चित गायक सागर आलेको युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यस्तै यसै गीतलाई नेपाल आईडलको सिजन २ मा फाईनलसम्म पुग्न सफल चर्चित गायिका अस्मिता अधिकारीले समेत फरक किसिमले प्रस्तुत गरेकी छिन् । यस गीतका ओरिजिनल गायक श्याम कार्कीकै युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गीतलाई कभर भर्सनका रुपमा भन्दा पनि फरक तवरमा फिमेल भर्सनका रुपमा नयाँ गीतकै रुपमा तयार पारिएको छ । मे २८ तारिखमा युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको यस गीतलाई छोटो समयमा नै ५ लाख ६५ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । २८ हजारभन्दा बढी लाईक पाईसकेको गीतमा १ हजार १ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् । गीतको भिडियोमा अस्मिताकै फिचरिङ छ । भिडियोलाई अनिल के मानन्धरले छायाँकन तथा निर्देशन गरेका हुन् । म्युजिक भिडियोलाई शिलन लम्सालले सम्पादन गरेका हुन् ।